EX - ABSDF: အောင်ကြီး စကားဝိုင်း
"အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မယ် ဖျက်မယ် ပြောခဲ့တာ ဦးလေးတို့ အမေစုပဲ မဟုတ်ဘူးလား?" "ဟုတ်တယ်လေ" "အခုရွေးကောက်ပွဲ နိုင်သွားတော့လည်း အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးလား?" "တခြားအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြိုင်ရင်ရော မင်းတို့က လက်ခံမှာ မို့လို့လား?" "အဲ"
"စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကြီးကိုင်ထားတာတောင် မနိုင်တဲ့လူတွေအတွက် စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောပေးပါဦး" "အဲ" "ကိုယ့်လူကိုယ် ဒိုင်လုပ်ခိုင်းပြီး ပြိုင်တာတောင် မနိုင်ရှာတဲ့ လူတွေကို မင်းအနေနဲ့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ နှစ်သိမ့်ပေးသင့်ပါတယ်ကွာ" "ဟင်" "လုပ်စမ်းပါကွ တစ်ခွန်းလောက်ပြောစမ်းပါ" "အပိုတွေလာပြောမနေနဲ့ဗျာ .... အခု အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြတော့ဘူးမဟုတ်လား" "ပြင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ မင်းကိုဘယ်သူပြောလဲ?" "ရှိရင် ၅၉(စ) ကို ပြင်ကြည့်ပါလားဗျ" "အဲ့ဒီအကွက်တွေနဲ့ မီးမွှေးလို့မရတော့ဘူး ငါ့ကောင်" "အမ်" "တခြားဟာ တစ်ခုခုပြောကြည့်" "တော်တော်ဆိုးတဲ့အချက်ကြီးက အကြီးကြီးပါဗျာ" "ပြောစမ်းပါဦး" "ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ကို ဒုသမ္မတ အဖြစ်တင်တဲ့အချက်လေ" "တင်တော့ ဘာဖြစ်လဲ?" "တင်တော့ စော်ကားသလိုဖြစ်တာပေါ့"
"နေစမ်းပါဦး အဲ့ဒီ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဒုသမ္မတက ရွှေတိဂုံဘုရားကို ခဏခဏတက်ပြီး
ဆုတွေတောင်းတတ်တဲ့ ဦးမြင့်ဆွေလိုမျိုး ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ဘုန်းကြီးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခဲ့ဖူးလို့လား?" "အဲ" "ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်ဘာသာကို စော်ကားဖူးလို့လဲ?" "အဲ့လိုတော့ မရှိပါဘူး" "ဒါဆို ဘာလို့စော်ကားတယ်ပြောရတာလဲ?" "ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုရှိတဲ့ နိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ကို ဒုသမ္မတ တင်တာက စော်ကားတာမဟုတ်လို့ဘာလဲဗျ"
"လက်ပတောင်းတောင်မှာ ဘုန်းကြီးတွေကို မီးလောင်ဗုံးကပ်တော့ မင်းမမွေးသေးဘူးထင်တယ် ... အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ သမိုင်းဝင် လယ်တီသိမ်တောင်အဖျက်ခံရတယ်တဲ့" "အာ ... မွေးပါပြီဗျာ" "အဲ့ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီတုန်းက မင်းဘယ်နားသွားသေနေလို့လဲ?" "အဲ" "အဲ့ဒီအကွက်တွေနဲ့လည်း မီးမွှေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့တော့ မရတော့ဘူးငါ့ကောင်" "ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ... အစိုးရသစ်အနေနဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုတော့ လုံးဝရပ်တန့်အောင်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်" "အခုမီပါသေးတယ်" "ဘာမီတာလဲဗျ" "နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို ပြောဖို့လေ" "အစိုးရသစ်ကို ပြောနေတာဗျ" "ဒါတော့ မပူနဲ့" "ဘာဖြစ်လို့လဲ" "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပြောပြီးသားဆိုတော့ စီမံကိန်းသဘောတူညီမှုတွေအားလုံး လူထုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြလိမ့်မယ်ထင်တယ်" "စီမံကိန်းကို ရပ်ခိုင်းနေတာလေဗျာ"
"သဘောတူညီမှုတွေကို စစ်ဆေးဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးမှ ရပ်မယ်မရပ်ဘူး ဆိုတဲ့အချက်ကို တပြည်လုံးခေါင်းချင်းဆိုင် တိုင်ပင်ကြရင်ပိုမကောင်းဘူးလား" "အဲ" "အဲ့ဒီအကွက်နဲ့လည်း မီးမွှေးဖို့ မကြိုးစားနဲ့တော့ ငါ့ကောင်" "ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ ... တပြည်လုံးရဲ့အသက် ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ရမယ်လေဗျာ"
"ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြမယ်လို့ပြောထားပါလျှက် ကာကွယ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မီးမွှေးဖို့ကြိုးစားနေကြတာကိုလည်း တပြည်လုံးက မြင်ကြတယ် ... ငါတို့အမသားလေးရဲ့" "အာဗျာ ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကာကွယ်ရမှာပဲ" "ကာကွယ်မယ်ဆိုရင် အခုလက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဆီမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း သဘောတူညီမှုတွေအားလုံး လူထုကို ချပြဖို့ တောင်းဆိုကြည့်ပါလား" "အဲ" "ပြောသာပြောရတာပါကွာ .... တကယ်တော့ လူထုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသံကို နားစွင့်နေကြတာများတယ်ကွ" "ဘာဖြစ်လို့လဲ?" "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တည်ငြိမ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတာရှိတော့ လူထုက ချက်ခြင်းနားလည်တယ်" "ဘာနားလည်တာလဲဗျ" "မတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မယ့်လူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းပေါ့" "အဲ"
"အခုဆိုရင် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်မယ့်ကိစ္စတွေပေါ်လာတိုင်း လူထုက သံသယ နဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာဆိုတော့ မင်းတို့အရင်လို လူပြိန်းကြိုက်တွေနဲ့ ဆွချင်တိုင်းဆွလို့မရတော့ဘူး" "အမ်" "တပ်မတော်နဲ့လည်း မဆွနဲ့ ၊ ကျောင်းသားနဲ့လည်း မဆွနဲ့၊ အခြေခံဥပဒေနဲ့လည်း မဆွနဲ့၊ တိုင်းရင်းသားနဲ့စစ်တိုက်ပြီးလည်း မဆွနဲ့၊ ဘာသာရေးနဲ့လည်းမဆွနဲ့ ... နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောရရင် မြစ်ဆုံနဲ့လည်း မဆွနဲ့ .... မရတော့ဘူး" "ဆွတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ" "ဆွတာမဟုတ်ရင်တော့ ယွ နေတာပဲဖြစ်မယ်" "အမ်" "ယွ နေတာအတွက်ကတော့ ငါရှိနေသ၍ မင်းစိတ်သာချ" "ဘာကို စိတ်ချရမှာလဲဗျ" "မင်းတို့အတွက် ဘာစကေဘီရယ် နှီးရယ် ငါ့မှာရှိတယ်လေကွာ" "(*&^%$#@!" _________ အောင်ကြီး
Cartoon credit : မောင်မောင်ဖောင်တိန်